WOWOW Ishushu kunye neCold faucet eyiBrown Nickel
Ikhaya / IFaucets yasekhitshini / Imbiza yokuGcwalisa iiMpompo zeKhitshi / WOWOW kushushu kwaye kubanda imbiza yokugcwalisa itephu yeNickel
WOWOW Ishushu kunye neCold pot Filler Faucet eyiBrown Nickel
I-Wall Wall Mount 2 Hole pot Faucet 2311400-KuMabini aManzi ashushu kunye neCold usebenzisa.
Isiqinisekiso se-ceramic se-NSF sokubonelela sisebenza ngokungasebenzi.
Ukuthambeka komhlaba wangaphakathi kubuchule obukhethekileyo bokucoca amaminerali kunye nelothe.
Iialves zeCeramic zijika kakuhle. Akukho ivolumu engaqhelekanga xa amanzi ehamba.
I-aerator eyakhelwe ngaphakathi i-neoperl ibonelela ngomthamo omkhulu kunye nokuhamba kwamanzi okuzinzileyo.
Izinto zomzimba: ukwakhiwa kobhedu okuqinileyo, kuqinisekisa ukuqina kunye nokuphila ixesha elide
Isaziso esibuhlungu 1: lumka xa ukhupha ngenxa yokwakha okuqinileyo!
Isaziso eshushu: ulumkele ukutsha xa ugqibezela imozulu yamanzi ashushu!
Ubude obu-Fold: 13.1 intshi
Ubude obungachazwanga: 22 intshi
Indawo yokuhlala: 5.9 intshi
Ukuphakama: I-6.7 intshi
I-Neoperl ABS ibonelela ngokuhamba kwamanzi ngokuzinzileyo, okuzinzileyo ukuya kumanani amakhulu, inokugcwalisa imbiza ngokukhawuleza. Kwakhona, i-aerator ingasuswa ngengqekembe ngokulula ukuze icoceke kwaye ithathe indawo yayo.
Uyilo oluDityaniswe kabini
Uyilo oludibeneyo kabini lokujikeleza nge-360-degree, unokuyikhupha ngokukhawuleza kwaye ngokufanelekileyo, ukuphucula umgangatho wakho wokupheka kunye nesantya. Awudingi kuthatha imbiza yakho ukuntywila ukuze uzalise amanzi. Kananjalo inokubuyiselwa xa ingasetyenziswanga.
Imigangatho yaseMelika yaseMelika
Isinxibelelanisi se-NPT kwizixhobo eziqinileyo zobhedu, kulula ukuzigcina. Izinto zebrass zikumgangatho olungileyo, enganguroliyo kunye nomhlwa. Isinxibelelanisi se-NPT kubungakanani obuqhelekileyo baseMelika, akukho mfuneko yakhathazeka ngeengxaki zokufakwa.
Imbiza yokucoca izimbiza yokusetyenziswa kwamanzi ashushu nabandayo. Nceda ulumke xa kugcwele imozulu eshushu yemibhobho, umbhobho ubushushu obuphezulu, kufuneka uchukumise umphezulu kwimeko yokulimala okungafunekiyo.
I-SKU: 2311400 iindidi: IFaucets yasekhitshini, Imbiza yokuGcwalisa iiMpompo zeKhitshi tags: itawuli yokufota, IFaucets yasekhitshini, udonga oluxhonywe edongeni
19.84 x 7.8 x 5.08 intshi